व्यावसायिक सुरक्षा र विकासमा भूमिका खेल्छु : अध्यक्ष चालिसे - Goraksha Online
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा नेकपाको प्यानलबाट चुनाव लडेका रामप्रसाद चालिसेले जितेका छन् । यस अघि उपाध्यक्ष रहेको चालिसेले चुनावमा विभिन्न एजेण्डाहरु अगाडि सारेका थिए । पछिल्लो समयमा तुलसीपुर क्षेत्रमा व्यवसायीका विभिन्न समस्याहरु छन् । होर्डिङ–बोर्डको करलगायत विभिन्न व्यवसायी समस्याहरुलाई हल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको समयमा व्यावसायिक सुरक्षा, व्यवसायीका समस्या, चुनाव जितेर आइसकेपछिका अबका भावि योजनाहरु र अहिलेको नेतृत्वबीचको समन्वय सहकार्यलगायतका विषयमा रामप्रसाद चालिसेसँग गोरक्षकर्मी बालाराम खड्काले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
 स्वागत छ सातावार्तामा ?
 धन्यवाद तपाईं अनि तपाईंको पत्रिकालाई तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि मेरा कुराहरु राख्न दिएकोमा ।
 यो जितलाई कसरी लिनुभएको छ ?
 तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघमा यस अघि पनि उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेको छु । तर अहिले अध्यक्षमा चुनाव जितेर आएको छु । यो जितलाई मैले अवसर र चुनौती दुवैको रुपले लिएको छु । म व्यावसायिक हकहितका लागि काम गर्छु भनेर मैले व्यवसायीहरुसँग मत मागेको थिएँ । मलाई सबैले मत दिएर जिम्मेवारीबोध गराउनुभएको छ । चुवान हो, जित–हार भइहाल्छ । एउटाले जित्ने अर्कोले हार्ने चुनावमा गएपछि स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसलाई ठूलो कुरा मान्नु हुँदैन ।
हिजो हामी फरक विचार र फरक तरिकाले चुनावी मैदानमा आएका थियौँ । तर अब भने हामीले व्यवसायीहरुको हकहित र तुलसीपुरको विकासका लागि काम गर्ने हो । मलाई अवसरका साथसाथै सबै व्यवसायीहरुलाई एक बनाएर लैजाने चुनौती पनि थपीएको छ । निर्वाचनमा एउटै हाम्रो मात्र प्यानले जितेको पनि छैन । सबै पक्ष र क्षेत्रकाको प्रतिनिधित्व भएको छ । अब सबैलाई मिलाएर सबैको समन्वय सहकार्यबाट तुलसीपुरको विकास र यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको हकहितका लागि काम गर्नका लागि मेरो पहल हुनेछ । व्यवसायीहरुका लामो समयदेखि धेरै समस्याहरु छन् ।
योसँगै कोभिड–१९ को संक्रमणले अहिले व्यवसायी क्षेत्रमा धेरै असर पारेको छ । धेरै व्यापार व्यवसायी गर्नेहरु अहिले निराशामा हुनुहुन्छ । कतिले त व्यवसाय नै छोड्र्नुपर्ने अवस्था आएको भन्ने तपाईंहरुले पनि लेख्नुभयो र सुन्नुभयो । विगतदेखि हालसम्म उठाउँदै आएका समस्या र सबैको हकहितका लागि मेरो नेतृत्वले अब काम गर्ने छ ।
 व्यावसायिक हकहितका लागि तपाईंका प्रमुख एजेण्डाहरु के–के हुन् ?
 मेरा व्यावसायिक हकहित र व्यवसायीका पक्षमा ४÷५ वटा प्रमुख एजेण्डाहरु छन् । पहिलो कुरा त अहिले घरबेटी र व्यवसायीबीच समन्वय गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसलाई मैले हल गर्नतिर लाग्नेछु । अहिले घरबेटीले आफूखुशी व्यवसायीहरुलाई हटाउने क्रम पनि त्यस्तै छ । यसैगरी केही व्यवसायीहरुले भाडाको कुरा पनि भन्नुभएको छ । अब मैले एउटा खाका तयार गर्दैछु ।
व्यवसायी र घरबेटीहरुसँग बसेर त्यसको समन्वय गरी तुरुन्त हटाउन नपाउने, यसैगरी व्यवसायीहरुले पनि भाडा कति समयमा दिने, कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेमा म लागेको छु । यसैगरी मैले स्थानीय प्रदेश सरकारसँग व्यवसायीसँगको सहकार्यका लागि पनि पहल थालेका छु । अहिले तुलसीपुरमा सुरक्षाका लागि सिसी–क्यामेरा जडानदेखि यहाँ बजारमा सडकबत्तीहरु जडानका लागि पहल भइरहेको छ । मैले स्थानीय सरकारसँग त्यसको विषयमा कुरा गरिसकेको छु ।
अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुखसँग यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । त्यस्तै अहिले तुलसीपुरमा व्यावसायिक बोर्डहरु राख्दा पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि उठेको छ । त्यसको पनि समस्या समाधान गर्नेमा म लागेको छु । कुनै व्यावसायिक प्रचार बोर्डहरु राख्नका लागि पैसा लिनु छुट्टै कुरा हो तर व्यवसायीहरुले आप्mनो पसलको नाम लेखेको पनि कर लिने भन्ने कुरा उठेको छ । यसका लागि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । हिजो मात्र राजश्व संयोजकसँग कुरा भएको छ । यसको तत्काल समस्या समाधान हुने छ । त्यस्तै तुलसीपुरको मासु र मण्डीमा पनि केही समस्या देखिएको छ ।
त्यहाँ उपमहानगरले फेरि टेण्डर प्रक्रिया गर्ने भन्ने सुनिएको छ । त्यसलाई पनि पहिलेदेखि नै व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र वैज्ञानिक भाडादर कायम गरी कसरी त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ । यिनै कुरालगायत व्यावसायिक हितका लागि गर्ने कुराहरुमा पनि हामीले प्रमुखताका साथ लागेका छौँ ।
 व्यावसायिक सुरक्षा र बजार व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई कसरी हल गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
 हो, व्यावसायिक सुरक्षाका कुरामा हामीले सिसी–क्यामेरा जडानदेखि बत्तीको कुरा मैले पहिले पनि गरेँ । भर्खर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुरा भएको छ । तुलसीपुर बजारमा रहेका खाल्डाखुल्डीदेखि बजार व्यवस्थापन र सरसफाईलाई पनि सुधार गर्दै लैजाने विषयमा स्थानीय सरकारसँग लागेका छौँ । यस विषयमा पनि हामीले जतिसक्यो छिटो समस्या समाधान गर्नेमा छौँ । त्यस्तै रात्रिकालीन व्यवसायी सञ्चालनको कुरा पनि व्यापक उठेको छ । सबै व्यवसायी, सुरक्षा प्रमुख र स्थानीय सरकारसँग मिलेर यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयासरत छौँ ।
यसको पनि टुङ्गो लाग्ने छ । पक्कै पनि यस विषयमा राम्रो परिणाम आउने छ । त्यस्तै तुलसीपुरका विमानस्थलको स्तर बृद्धिदेखि इन्धन–डिपोको विषयमा अहिले स्थानीय सरकार पनि छ, त्यसको सँगसँगै हामीले पनि व्यावसायिक क्षेत्रबाट पहल हुने नै छ । यसमा पनि हामी लागेका छौँ । यसलाई निरन्तर पहल गर्ने छौँ ।
 तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघमा गैरव्यवसायीहरु पनि धेरै छन् भन्ने छ, यो विषयमा केही सोच्नुभएको छ ?
 मलाई त्यति धेरै गैरव्यवसायीहरु छन् जस्तो लाग्दैन । अहिले सदस्यता हुनका लागि कर चुक्ता नगरपालिका, कर कार्यालयलगायतको क्षेत्रमा करिब ७ हजार ५ सय कर तिर्नुपर्छ । मलाई लाग्दैन यदि गैरव्यवसायीहरुले यति धेरै कर तिरेर सदस्यता नवीकरण गर्नुहुन्न । कहीँकतै दुई–चार जना होलान् । त्यो पनि केही कारणले व्यवसाय गर्न नसकेको तर नवीकरण गरिरहेका पनि तर त्यसलाई गैरव्यवसायी भन्न मिल्दैन ।
यहाँ लेवर, चालक परिचालक तथा अन्य व्यक्तिहरु सदस्य छन् भन्ने धेरैको भनाई छ । यदि त्यस्तो भए म त्यसलाई छानविन गर्ने छु । होइन भने केही कारणले एक वर्ष ६ महिना व्यवसाय नगरेर व्यवसायीको तयारीमा रहेकालाई गैरव्यवसायी भन्न मिल्दैन । उहाँहरुले एउटा व्यवसाय छोडेर अर्को व्यवसाय गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ होला । उहाँहरुले व्यवसाय पछि पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।
 धेरै व्यवसायीहरुले उद्योग वाणिज्य संघमा नवीकरण नगरेर बाहिरिएका छन् नि ?
 हो, केही व्यवसायीहरुले नवीकरण गर्नुभएको छैन होला । अब त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई नवीकरण गर्ने र हामीले बाहिर रहेका व्यवसायीहरुलाई समेट्ने वातावरण निर्माण गर्ने छौँ । हामीले सबै व्यवसायीलाई एकताबद्ध बनाएर सबैका सल्लाह सुझाव र सहमतिले यस क्षेत्रको व्यापार व्यससायलाई ढुक्कसँग व्यापार व्यवसाय गर्ने र सहज वातावरण निर्माण गर्नेछौँ ।
 एक पक्षीय चुनावमा पराजय भोगेका व्यवसाय, नवीकरण नगरेका व्यवसायीहरु छन्, उनीहरुलाई कसरी समेट्नुहुन्छ ?
 हो, मैले अघि पनि भने, मेरो टिममा हाम्रो प्यानलले मात्र चुनाव जितेको छैन । चुनावमा हार–जित त हुन्छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर मेरो टिममा प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी, स्वतन्त्र र सबै मिश्रित छन् । यससँगै मैले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नेछु । चुनावी मैदानमा रहनुभएका तथा अन्य संघका पूर्व अध्यक्ष, सल्लाहकार, बुद्धिजीवी, व्यवसायीहरुको सल्लाह सुझाव र सबैको एकताको लागि मैले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नेछु । सबैले उद्योग वाणिज्य संघ हाम्रो हो भन्ने सबैको प्रतिनिधित्व बनाउने छु । असन्तुष्टि पक्षलाई पनि मैले मिलाएर लैजाने छु ।
 अन्त्यमा म तपाईं र तपाईंको पत्रिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यस्तै निर्वाचनमा मलाई विजय गराउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यस्तै मलाई अमूल्य मतदान गर्ने व्यवसायीहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु् । मलाई तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा जिताउनुभएको छ । म सबैको भावना, सबैको मन जितेर व्यावसायिक हकहित र व्यवसायीको लागि निरन्तर लाग्ने छु । व्यवसायीका हरेक समस्या समाधानका लागि म लाग्ने छु । सबैको सल्लाह सुझाव र सबैलाई समेटेर व्यावसायिक हितका लागि मेरो प्रयास हुनेछ । सबै व्यवसायीले उद्योग वाणिज्य संघ हाम्रो हो भन्ने अपनत्व विकास गर्ने गरी मैले काम गर्ने छु ।